Dagaalo Goos Goos Ah Oo ka Soconaya Koofurta Gobolka Baay
Home Somali News Dagaalo Goos Goos Ah Oo ka Soconaya Koofurta Gobolka Baay
Dagaalo goos goos ah ayaa dhanka koofureed ee Baay wali ku dhexmaraya doowlada Soomaaliya oo ay taageerayaan kuwa Ethiopia iyo Al-shabaab.
Iska hor’imaadyada ayaa ka kala dhacay tuulooyinka “Saydheeloow iyo Awdiinle” oo hoostaga magaalada Baydhabo ee xaruunta gobolka Baay.
Wararka laga helayo tuulooyinka ay iska hor’imaadyada ka dhaceen ayaa xaqiijinaya in Ciidamada doowlada Federaalka ay weerareen tuulooyinkaas, dagaalka ka dhacay Saydheeloow waxaa ku dhintay laba ruux oo dhinacyada dagaalamayay kamid ahaa, halka dagaalka ka dhacay Awdiinlena ay ku dhinteen ilaa 3 ruux, 4 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaasoo dhamaantood ahaa dhinacyada dagaalamayay.
Gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isxaaq Ari-cas, oo la hadlayay VOA-da ayaa sheegay in Ciidamada doowlada Federaalka oo howlgalo ka wada degmada Awdiinle inuu halkaasi iska hor’imaad ku dhexmaray kooxda Al-shabaab, waxa uuna xusay in howlgalkaasi uu ka danbeeyay kadib markii ay ka warheleen in shabaabku isku urursanayeen deegaankaas.
Dhanka Al-shabaab kama aysan hadlin dagaalada goos gooska ah ee saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay tuulooyin ka tirsan gobolka Baay.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa 23-kii January...